We Fight We Win. -- " More than Media ": နှစ်ချို.နေသော လူလိမ်များ (အေးအေးစိုးဝင်း -ဘာသာပြန်)
နှစ်ချို.နေသော လူလိမ်များ (အေးအေးစိုးဝင်း -ဘာသာပြန်)
By Carl Sandburg , American Poet
အစုတ်တွေ နဲ. လိမ်။
ကိုယ် လုံးတီးနဲ.တောင် လိမ်သေးတယ်။
မရိုးနိုင် အောင် ပိပိယိယိ တိုင်ပတ်လိမ်သည်ပေါ.။
သင်္ချိုင်းက ပန်းရံ ဆရာ
ကျောက်ကညစ် ကူ ကာ ဖြင်.
မဟုတ်တာ အဟုတ်လုပ် ရေးနေရပြီ၊
ဂူမှာတည်တဲ. ထွင်းစာ---မုသာတွေ အတိ --
မသာလူလိမ်၏ စကား၊ သို.အားဖြင်. ---
ကျောက်သားပြင် မှာ ကျန်ခဲ.တယ်။
ဇက်ပိုး က မုသားထွက်
လူလိမ် လူလိမ်---သူဖြောင်.ပုံ ဆိုဖွယ်ရာ မရှိဘူး။
ခွေးရဲ. စွေစောင်းစောင်း နောက်ခြေထောက်၊
ပြီးတော.- ကောက်နေတဲ. ဖေါက်တံ ၀က်အူ
အမှောင်ညသန်ကောင်မှာ အစခြေရာ ရှာမရတဲ.
အမောင် ကြောင်မဲ ကြီး ဖြူသလောက်သာ။
And the stone-cutters earnaliving—with lies—on the tombs of liars.